Friday March 01, 2019 - 16:39:51 in WARARKII UGU DAMBEEYEY by Super Admin
Ciimadii Ka Hawl Galyey Goobtii Qaraxu Ka Dhacay Muqdisho Si Ay U Soo Af Jaraan Weerarkii Oo laba Kooxod U Kala Jabay Iyo Khilaafkoo In Shabaab Xaafadihii Ka Quraacato Kana Qadayso Waxaa weli socda howlgalka ay ciidmada dowladda Soomaaliya ka wadaan dhismo ay xalay gudaha u galeen rag ka tirsan Al-Shabaab oo ku dheggan maqaaxida Hilaac UK. Xog nasoo gaartay ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ay tababareen Alpha Group iminka si rasmi ah loogu
wareejiyey howl-galka, si ay Shabaabka uga saaraan dhismaha ay ku jireen. Booliiska ayaa horey u sheegay inay soo geba gebeeyeen howl-galka, hase yeeshee, ilo wareedyo Alpha Group ka tirsan ayaa beeniyay sheegashadii ciidanka booliska ee ahaa in la soo gabagabeeyay weerarkii agagaarka Maka
Al-Mukurama iyo dhismayaasha ku dhow dhow. Alpha Group ayaa wararku ay sheegayaan inay illaa xalay diidanaayeen inay goobta galaan, shuruudna ka dhigtay in nabad-sugidda loo beddelay booliska meesha laga saaro. Dowladda xog buuxda kama aysan bixin inta ay yihiin ragga gudaha u galay dhismaha, khasaaraha weerarka ka dhashay iyo haddii ay jiraan rag ay ka dileen kooxda gudaha ka dagaalameysa. Ugu yaraan 20 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen qaraxyada iyo weerarkii xigay, ayada oo 40 kale ay dhaawac yihiin
Dhanka Kale Sida U Xaqiiyey Wariye Cabdale Axmed muumin ALPHA Group illaa xalay waxay ku adkeysanaysay inaysan galeyn goobta weerarka uu ka socday, sababo ay ku sheegeen inaysan la hawlgali karin ciidanka NISA horey u ahaan jiray, ee hadda booliska loo beddelay.
Saraakiisha aan la hadlay waxay ii sheegeen in ciidankan karti daran yahay, isla markaana aan la aamini karin, sidaa darteedna aysan dooneyn in Alpha Group ka garab dagaalanto.
Alpha Group waa ciidanka horey Mareykanka u tababaray, dhaqaalana ka hela dowladaha taageera la dagaalanka argagixisada. Mareykanka ayaa siiya dhaqaale, halka Ingiriiskuna ka caawiyo qalabka iyo wadaagidda xogta.
Waxaa kaloo xalay dhacday sarkaal NISA-dii hore ah iyo mid ka tirsan Alpha Group inay isku maandhaafeen arrintan, iyagoo is aflaagadeeyay, kaddibna waxay gaartay in qoryo la isula boxo. Inkastoo markii dambe xiisadda la dejiyay.
Inta waxan oo dhan dhacayaan, waxay kooxda argagixisada ee ku jira gudaha dhismayaasha ay wadeen dilka dadka iyo qaraxyo bambooyin oo ay tuurayeen!!.